Ma 3D wax daabacan nafta? waxaad kala soo baxdaan inay ogaadaan qalabka daabacaadda 3D kulul - Shiinaha Cixi Lanbo Daabacaadda
Ma 3D wax daabacan nafta? waxaad kala soo baxdaan inay ogaadaan qalabka daabacaadda 3D kulul
Dad badan ayaa lacag bixisid si aad daabacaadda 3D, ugu horreeya oo dhan, jiidatay by waxyaalaha yar yar oo qurux badan daabacay 3D dareenka. Dheeraad ah, saaxiibada qaar ka mid ah daryeeli doonaa oo ku saabsan waxqabadka lagu daydo kala duwan ee madbacadaha 3D, iyo qalabka daabacaadda 3D la dayacay kiisaska intooda badan. Dhab ahaantii, qalabka daabacaadda 3D la odhan karaa in an sal qalab muhiim u ah horumarinta technology daabacaadda 3D. diyaarinta qalabkan inta badan go'aamisa haddii daabacaadda 3D la sii ballaadhan loo isticmaali karaa.
Waqtigan xaadirka ah, qalabka daabacaadda 3D inta badan waxaa ka mid ah qalabka polymer, qalabka biraha, qalabka budada, qalabka dhoobada iyo qalabka kooban.
qalabka polymer inta badan waxaa ka mid ah balaastigga injineernimada, bacyaal-bio, bacyaal thermosetting, Beeyada photosensitive, iwm, iyo waxqabadka noocyada kala duwan ee qalabka waa arrin oo kala duwan.
caag Engineering loola jeedaa caag warshadaha loo isticmaalaa sida qaybaha warshadaha ama qalabka sanduuqa battariga ee dibadda. Waa caag ah oo xoog u fiican, saameynta iska caabin ah, iska caabin ah kulaylka, engegnaantaada iyo iska caabin gaboobaya. Waa nooc ka mid ah wax daabacaadda 3D la tiro balaadhan oo ah codsiyada, bioplastics Waxaa inta badan uu leeyahay uurqaadida, PETG, PHB, iwm, oo uu leeyahay biodegradability wanaagsan; cusbi thermosetting xoogga sare iyo iska-caabbinta dab, oo waa mid aad u haboon budada sintering laser sameynta nidaamka la isticmaalayo daabacaadda 3D, cusbi photosensitive uu leeyahay xawaare dhakhso Daaweynta, miiska waxqabadka qalalan Wanaagsan, muuqaalka siman ka dib markii wax taaj oo kale, waa doorashada ee badan-sax sare waxyaabaha daabacaadda.
wax macdan ah
Inkasta oo inta badan oo ka mid ah qalabka daabacaadda 3D hadda waa balaastigga, xoogga wanaagsan farsamo iyo conductivity korontada ee biraha ku sameeyey cilmi aad u xiiso daabacaadda ee alaabta birta ah. The alaabta ugu muhiimsan ee birta ah waxaa ka mid ah biraha ferrous oo ay ku jiraan ahama iyo superalloys, iyo macdanaha non-ferrous sida titanium, waxaaga aan magnesium, iyo gallium.
Waa ma wax caag ah midna wax bir ah, laakiin waxa ay ka waafajinta wanaagsan in technology daabacaadda 3D, qalabka budada weli yihiin doorasho wanaagsan, waayo, daabacaadda 3D. 3D daabacaadda waxay u baahan tahay qalab budada sare, iyo budada wax taaj oo kale ah waxaa loo baahan yahay in ay leeyihiin formability wanaagsan wax, xoog wax taaj oo kale sare, size yar walxaha budada, ku adag tahay in agglomeration, hantida rogid wanaagsan, cufnaanta habboon iyo porosity, iyo qallajinta degdeg ah iyo qalbi engegnaantooda aawadeed. The ciid damiya printer is-saaray 3D nooca ugu horeysay ee ay soo WEYDII Technology Co., Ltd. isticmaalaa ciid quartz in qalabka budo.
budo dhoobada Aluminosilicate waxaa loo isticmaali karaa in 3D daabacay alaabta dhoobada. 3D daabacay alaabta dhoobada waa boogeed biyaha, kulaylka (ilaa 600 ° C), loo cusboneysiin karo, oo aan sun ahayn, laakiin xoog ma aha sare, waxa loo isticmaali karaa sida cookware kahyraadka, weelka (koob, maddiibadaha, taarikada, ukunta koob iyo coasters)) iyo qalabka decoration guriga sida laambadihii, marmarka, dheryaha, iyo arts.
Waxaa sugan in, sida ku saleysan daabacaadda 3D, qalabka daabacaadda 3D noqon doonaan suuqa muhiim u ah daabacaadda 3D mustaqbalka. qalabka More iyo ka badan qaab ciyaareedka fiican la diyaarin doonaa si kor loogu qaado horumarinta warshadaha daabaco 3D. Intaa waxaa dheer, marka lagu daro qalabka daabacaadda 3D, hanashada farsamada asaasiga ah iyo qaybaha muhiimka ah ee daabacaadda 3D sidoo kale waa guul muhiim ah horumarinta warshadaha daabaco 3D qoyska. taxanaha 3D duufaan printer The bilaabay by WEYDII waa printhead ugu horeysay inkjet horumariyo Shiinaha. (3D qaybaha muhiimka ah daabacaadda) waa guul aad u weyn, oo waxaan rajaynayaa in shirkado badan oo Shiinaha maal karo tamar badan ee soo koraya technology core daabacaadda 3D halkii ku tiirsan oo gebi on technology shisheeye.